YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, January 26
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/26/20110အကြံပြုခြင်း
NLD ကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရန် အမေရိကန် အဆင့်မြင့် သံတမန်တောင်းဆို
နရီလင်းလက် Wednesday, 26 January 2011 19:53
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို တရားဝင်ပါတီ အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုလျှင်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို လွှတ်မပေးလျှင် အမေရိကန် အစိုးရအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ရုတ်သိမ်းပေးရန် စဉ်းစားမည် မဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန် အဆင့်မြင့် သံတမန်တဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဂျိုးဇက် ဝိုင်ယွန်းက အင်ဒိုနီးရှား အခြေစိုက် ဂျာကာတာပို့စ် သတင်းစာကို အင်္ဂါနေ့က အထက်ပါအတိုင်းပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၂၀၁၁ အတွက် အာဆီယံ ဥက္ကဌ ဖြစ်သည်။
ဂျိုးဇက် ဝိုင် ယွန်းက မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ရုတ်သိမ်းရန် မစဉ်းစားမီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန်၊ နိုင်ငံနှင့်အ၀န်းတွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည့် အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို လွှတ်ပေးရန် ပြောခဲ့သည်။
ဂျိုးဇက် ဝိုင် ယွန်း၏ ပြောကြားချက်သည် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းပေးရေး ပြောဆိုပြီး တပတ်အကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများတွေ့ဆုံရာ၌ “မနှစ်က မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပသွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာတဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး တုန့်ပြန် သွားသင့်တယ်” ဟု ပြောခဲ့ကြကြောင်း ဂျာကာတာပို့စ် သတင်းစာတွင် ပါရှိသည်။
ဂျာကာတာပို့စ် သတင်းစာအရ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ရုတ်သိမ်း ပေးရန် ပြောကြားရာတွင် အမေရိကန် အစိုးရ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
“အာဆီယံ ၀န်ကြီးတွေ တောင်းဆိုတာ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ တောင်းဆိုချက်ပါ။ ဒါကို မြန်မာအစိုးရက လေးလေးနက်နက် သဘောထားပြီး စစ်စစ်မှန်မှန် အကောင်အထည် ဖော်သင့်တယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်” ဟု ဂျိူးဇက် ဝိုင် ယွန်းက သတင်းစာကို ပြောသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ တောင်းဆိုချက်များအတိုင်း မြန်မာအစိုးရက လိုက်လျောမှသာလျှင် အမေရိကန် အစိုးရဘက်မှ ကောင်းမွန်သည့် တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပီ ဂျေ ခရိုးလေးအား သတင်းထောက်များက မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရုတ်သိမ်းရန် အမေရိကန် အစိုးရ အနေနှင့် အစီအစဉ်ရှိ မရှိ မေးမြန်းရာတွင် ၎င်းက ရုတ်သိမ်းရန် အခြေအနေ မရှိသေးကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည်။
သူက ဆက်လက်၍ အမေရိကန် အစိုးရ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ အပေါင်းအပါ စီးပွားရေး အုပ်စုများကိုသာ ပစ်မှတ်ထား၍ ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ် မရည်ရွယ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အရေးကို အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ စိတ်တွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေက မြန်မာအစိုးရမှာပဲ လုံးဝဥဿုံတာဝန်ရှိတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ရှိသည့် သယံဇာတပစ္စည်းများကို မတရား ခိုးယူ ဖြုန်းတီးနေသူများမှာ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များသာ ဖြစ်ပြီး အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုများ ပြုလုပ်နေသည်မှာလည်း မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များသာ ဖြစ်ကြောင်း သူကပြောသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေတာက မြန်မာပြည်ကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့၊ အကျဉ်း သားတွေ လွတ်လာဖို့၊ စစ်အစိုးရက စပြီး ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို စပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပါ။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆက်ထိန်းထားတာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဂျိူးဇက် ဝိုင် ယွန်းသည် NLD ပါတီကို စစ်အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုနေသော်လည်း NLD ၏ ရှေ့နေများက ပါတီဖျက်သိမ်းခံရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တနင်္လာနေ့က အထူးအယူခံအတွက် နေပြည်တော်တွင် လျှောက်လဲချက်များ တင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်တရားရုံးက မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှ မချခဲ့ပေ။ ။
Jerret Funeral Home
1141 St. Clair Ave West, Toronto, ON. M6E1B1
7241 Jane Street, Concord , ON. L4K 1A7
Ko Win Bo (1962-2011)
Regret to inform you that Ko Win Bo passed away at 9:30 AM, January 26, 2011. He had been suffering with cancer for the past few months. His condition worsened since last week and he died at St. Joseph hospital in Toronto just before he reached at his 50 in May.
His funeral is taking place at Jerrett Funeral Home from 11:30 AM to 1:30 PM on Saturday, January 29, 2011, where Buddhist religious service will follow. Then, he will be laid to rest at Beechwood cemetery at Jane St and HW 407 on the same day.
U Thant documentary by U Aung Zaw Htet(DVB)
ဦးသန့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျွှန်တော်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းလေးပါ။
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးသည် မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ဒေသဖြစ်၍ ရေချိုတွင်းများ ရေငန်ပြောင်းလဲလာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသည် မြေအောက်ရေထုတ်ယူ သုံးစွဲမှု ဒုတိယမြောက် အများဆုံး တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် ရေချိုရေတွင်းများ ရေငန်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာကြောင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ သုတေသနစာရင်းပြုစုခဲ့သူ (Ecov)လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းမျိုးသူကပြောသည်။
ရေငန်ရေတွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသောမြို့နယ်များမှာ လှိုင်မြစ်အနီးရှိ မြို့နယ်များဖြစ်ကြောင်း ရေငန်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာခြင်းကို ၂၀၀၈ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီးတွင် ကြုံတွေ့ရကြောင်း လှိုင်မြစ်ကမ်းအနီး၌ နေထိုင်ကြသူများက ပြောသည်။ အလုံမြို့နယ် အောင်ဇေယျလမ်းတွင်နေထိုင်သူတစ်ဦးက ယင်းတို့နေထိုင်ရာလမ်းရှိ ရေချိုတွင်းများသည် ရေငန်တွင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီး၊ အသစ်တူးဖော်သော ရေတွင်းများသည်လည်း နောက်တစ်လခန့်တွင် ရေငန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာကြောင်း ယင်းရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ်သုံးရာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ယားပိန့်များထွက်ခြင်းနှင့် အ၀တ်အထည်များ ၀ါကျင်ကျင်အရောင်ဖြစ်ခြင်းများ ကြုံရကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ရေချိုတွင်းရေများ ရေငန်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာရခြင်းကို ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့တွင် အဖြစ်များကြောင်း သိရသည်။ “ရေချိုတွေ ဘာကြောင့်ငန်တယ်ဆိုတာ သေချာတိုင်းတာမှုမရှိပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့ဟာ ရေအရင်းအမြစ် ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုမှာ မန္တလေးမြို့ပြီးရင် ဒုတိယလိုက်တော့ ထုတ်သုံးတာများတော့ လစ်ဟာနေတဲ့ရေချို နေရာတွေအစား ရေငန်တွေတိုးဝင်လာတာဖြစ်မယ်” ဟု Ecov လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းမှ အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသည်။
သောက်သုံးရေ ပြည့်ဝစွာရရှိရေးသည် ယခုနှစ် နောက်ပိုင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့် ရေချိုသိုလှောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် သစ်တောများ ပြုန်းတီးမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့် အမျိုးသားအဆင့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေအောက်ရေချိုထုတ်ယူ သုံးစွဲရာတွင် အလွန်အကျွံသုံးစွဲရန်မသင့်သော ဒေသကြီးသုံးခုရှိပြီး ယင်းတို့မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် နွေရာသီတွင် ရာသီဥတုပူပြင်းမှုနှင့် ယမန်နှစ် မိုးရာသီကမိုးရွာသွန်းမှုရက် လျော့နည်းခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအချို့တွင် ရေချိုရရှိရန် ခက်ခဲခဲ့သည်။
စောင့်မျှော်နေတဲ့ ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း (DAWEI DEEP SEA PORT)
Written by ဇော်မိုးဦး (မြိတ်)
ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်မည့် ထိန်ကြီးရွာကမ်းခြေ
ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားသောလမ်း ဖောက်လုပ်ထားမှုကို ထိန်ကြီးရွာမှ တွေ့ရစဉ်
ဒီတစ်ခေါက် ထားဝယ်ရောက်ခဲ့တော့ ဒေသခံတွေကြားမှာ နေ့စဉ်နီးပါးမျှ ပြောဆိုနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းရာတွေပါပဲ။ သူတို့ နေ့စဉ်ပြောနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ကြောင့် ထားဝယ်မြို့ ဘယ်လောက်အထိ စီးပွားရေး တိုးတက်လာနိုင်တယ်၊ အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းတွေမှာ ဒေသခံတွေ အနေနှင့် ဘယ်အတိုင်းတာအထိ ရရှိလာနိုင်မလဲ။ အခုဆို အိမ်ဈေးတွေ တက်လာတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ လမ်းဖောက်လုပ်မယ့် အနေထားတွေ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ထင်မြင် သုံးသပ်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူတို့ အတော်လေး မျှော်လင့်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဘွဲ့ရလူငယ် တစ်ချို့ကလည်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်တာနက်မှ ရသမျှ အချက်လက်တွေနှင့် ဂျာနယ်တွေက သတင်းအချက်လက်တွေ စုဆောင်းနေတာ တွေ့ရတယ်၊သူတို့အနေနှင့် ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှာ အလုပ်တစ်ခုခုရဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေသလို၊ အချက်အလက်တွေနှင့် ပတ်သက်လာရင် ခရီးသွားတွေ မေးလာရင် ပြန်ဖြေနိုင်ဖို့၊ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်လာရင် အထောက်ကူရဖို့ လေ့လာနေတာ တွေ့ရတယ်။
ထားဝယ်မှ နဘုလယ်သို့ မိုင် ၂၀ ကျော်ခရီး
ထားဝယ်မှ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသို့ သွားဖို့ဆိုရင် မောင်းမကန် အပန်းဖြေစခန်းက မပါမဖြစ်။ ဒီလမ်းက သွားမှဖြင့်တော့ မောင်းမကန်ကို လူတိုင်း ၀င်လည်ကြလိမ့်မည်။ ထားဝယ်မြို့မှ မောင်းမကန်ကို မိနစ် ၃၀ ခရီးရှိပြီး
အကွာဝေးကတော့ ၁၀ မိုင် ခရီးရှိ သည်။ ထားဝယ်မှ မောင်းမကန်ကို ကတ္တရာလမ်း ခင်းထားပြီး ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အရေးပါလာမယ့် ကမြောကင်း တံတားကို ဖြတ်သန်းလိုက်တော့ လောင်းလုံးမြို့နယ်ကို စ၀င်လာပြီ။
လမ်းဆုံမှာတော့ ဗိုလ်မှူးဗထူး ရုပ်တုကြီးက ခံ့ညားစွာ တည် ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ လေးသွန်းခံရွာဇာတိ ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကျလို့ ဒီနေရာကနေ ခရီးသွားတွေ အသွားများလာရင် ဗိုလ်မှူးဗထူး ရုပ်တုဟာ ခရီးသွားများ အတွက် အမှတ်တရ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ ရှိတယ်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူး ရုပ်တုရဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ချိုးကွေ့သွားရင် လောင်းလုံးမြို့နယ်ကို ရောက်မှာဖြစ်ပြီး ညာဘက်ကို သွားရင်တော့ မောင်းမကန် ကမ်းခြေ၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဘက်ကို သွားရာလမ်းကို ရောက်မယ်၊ မောင်းမကန်ကို သွားတဲ့လမ်းကတော့ အရင် တိုင်းပဲ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး၊ မောင်းမကန်ရောက်တော့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို သွားဖို့စီစဉ်ကြတော့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက ကိုမိုးဝေတစ်ယောက်ပဲ ပါလာတော့တယ်၊ အချိန်ကလည်း နေကျဲကျဲတောက်ပူနေတဲ့ နေ့လည်အချိန်ကြီး။ သွားရမှာက ဝေးတယ်၊ နေရာလည်း ခေါင်တယ်ဆိုတော့ သိပ်မလိုက်ချင်ကြတော့ဘူး။
ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို သွားဖို့ သူငယ်ချင်း ကိုမိုးဝေနှင့် ဆိုင်ကယ်ခရီး စတင်လိုက်ပြီး မောင်းမကန် ရေပူစမ်းကို စတင် ဖြတ်သန်းလိုက်သည်။ ရေပူစမ်းက မောင်းမကန် စံပြကျေးရွာအပိုင် ဖြစ်ပြီး ဒီနေရာမှာတော့ လမ်းအနေထားက သိပ်ပြီး မကောင်းသေး။ ကတ္တရာလမ်းပျက်ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပြီး ရေပူစမ်းကို လွန်လာတော့ ပန်းတင်အင်း စံပြကျေးရွာကို ရောက်သည်။ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအတွက် အသုံးပြုရန် လမ်းဖောက်ထားသော မြေသားလမ်းကို စတင် ဖြတ်သန်းလာပြီး လမ်းမှာ မောင်း၍ကောင်းသော လမ်းအနေထား ဖြစ်သည်။ မြေသားပေါ်မှာ ကျောက်စရစ်လေးများ ကြိတ်ထားသည့် ပုံစံဖြစ်ကာ သွားလာရ အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ထားတာ တွေ့ရသည်။ လမ်းကို ရွာထဲမှ ဖောက်လုပ်ထားပေမယ့် အိမ်တွေကိုတော့ ဖြတ်သန်းပြီး လုပ်ဖို့ မရှိကြောင်း၊ လမ်းနှင့်ကပ်လျက် အနေထား ရှိနေသော အိမ်တစ်အိမ်မှ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ လမ်းမှာ ယာယီအနေထားသာ ရှိသော်လည်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းကြီး အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်လျှင် တစ်လမ်းသွားပုံစံထက် တိုးချဲ့လာရန် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ပန်းတင်အင်းရွာ လွန်လာတော့ မူးဒူး ရွာကို စတင် ၀င်ရောက်လာပြီ။ အဲဒီရွာတွေမှာ ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းတွေကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြတာ တွေ့ရသည်။
ထားဝယ်မြို့ကြီးကတော့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရုန်းကြွလာနေပြီ ဖြစ်သလို အနာဂတ် လူငယ်များ အတွက်လည်း ၁၀ နှစ် စီမံကိန်းဖြင့် တည်ဆောက်မည့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကြီးမှာ . . .
''အခု ကျွန်တော်တို့ ရေဖြူမြို့နယ်ထဲက ၀င်လာနေပြီ၊ အရင်က ဒီနေရာတွေကို သွားလာဖို့ မလွယ်ဘူး၊ လမ်းကကြမ်းသလို နယ်မြေလည်း အရမ်းကြမ်းတယ်၊ အရင် သဲလမ်းတွေ ဖြစ်ပြီး ဒေသခံတွေပဲ မောင်းတတ်တယ်၊ အခု ဒီလိုလမ်းတွေ ဖောက်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဒီဒေသလည်း အထိုက်လျောက် ဖွံ့ဖြိုးလာသလို သွားလာလည်ပတ်တဲ့ သူတွေလည်း များလာတယ်''ဟု ကိုမိုးဝေက ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်း ရှင်းပြပါသည်။ လမ်းက တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ပြတ်လှသည်။ မြေသားတစ်လျှောက်တွင် ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လမ်းဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ထောင်ထားတာ တွေ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အစီစဉ်အလိုက် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဘက်မှ စိုက်ထူလာတာ တွေ့ရသည်။ မူးဒူးရွာကို လွန်လာတော့ နဘုလယ်ရွာ အပိုင်ထဲကို ရောက်လာပြီ၊ နဘုလယ်ရွာ မ၀င်မီ တစ်ဖာလုံခန့် အလိုမှာတော့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်သို့ သွားရာလမ်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရာလမ်းကို ရောက်လာတယ်၊ ဒီနေရာက ထိန်ကြီးကျေးရွာ ဖြစ်ပြီး လမ်းဆုံဖြစ်တယ်၊ တစ်လမ်းက ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဖြောင့်တန်းစွာ ဖောက်လုပ်ထားသည့် လမ်းဖြစ်ကာ တစ်လမ်းကတော့ မောင်းမကန်မှ နဘုလယ်ကို ဖောက်လုပ်ထားတာ တွေ့ရသည်။
မောင်းမကန်မှ နဘုလယ် ၁၃ မိုင် ခရီးက ဒီမှာ အဆုံးသတ်သည်။ မောင်းချိန်က ၄၅ မိနစ်ခရီး ရှိပြီး ထားဝယ်မှ ဆိုရင်လျင်ဖြင့် ၂၃ မိုင်ကြာချိန်က တစ်နာရီကျော် ရှိသည်။ ထိန်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို သွားဖို့
အရှေ့မှာရှိတဲ့ မြေသားလမ်းကနေ ၀င်လိုက်ရတယ်၊ လမ်းဆုံလမ်းကတော့ သွားလို့မရဘဲ သဲလမ်းအနေထား ဖြစ်သည်။ ထိန်ကြီးရွာထဲမှာတော့ လမ်းတွေ အများအပြား ဖောက်လုပ်ထားပြီး လူနေအိမ်ခြေတွေနှင့်တော့ ဝေးသည်။
စက်မှုမြို့တော်အတွက် လမ်း တွေ အရင် ဖောက်လုပ်နေပြီး အခြေခံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှုတွေ မတွေ့ရသေးပေ။ မြို့ပတ်လမ်းလို ပုံစံတွေ ဖောက်လုပ်ထားပြီး စက်မှုမြို့ တည်ဆောက်မည့် နေရာတွင် လတ်တလော လွင်ပြင်များ၊ တောချုံများသာ တွေ့ရသည်။ထိန်ကြီးကျေးရွာရှိ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်မည့် နေရာ ရောက်တော့ ကမ်းခြေအနေထားကို လိုက်လေ့လာမိသည်။ ''ကမ်းခြေက လျှောစောက် အရမ်းနက်တယ်၊ အဘလှေကလေးထားတဲ့ နေရာမှာဆို ရေက အရမ်းနက်နေပြီ၊ ကမ်းခြေအထိ ကို လမ်းဖောက်လုပ်ထားပေမယ့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို တစ်လပိုင်းလောက်မှ လုပ်မယ်လို့တော့ ပြောသံကြားတယ်။ ဒီမှာက ရှမ်းတွေ(ထိုင်းလူမျိုးများကို ဆိုလို)ပဲများပြီး ၈၀ လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ ဗမာလူမျိုး အလုပ်ကြမ်းသမားတွေက ၂၀ လောက်ပဲ ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ တစ်ရက် လုပ်အားခက ကျပ် ၃၅၀၀ ရကြတယ်။ အဘတို့ရွာကို လျှာထားမှုအထဲမှာ ပါတယ်လို့ ပြောပေမယ့် အခုထိတော့ ပြောင်းဖို့ မကြားရသေးပါဘူး။ လမ်းဖောက်လုပ်မှုတွေမှာပါတဲ့ ဥယျာဉ်တွေ၊ လယ်တွေကို သတ်မှတ်တွက်ချက်မှုတွေနှင့် ပေးမယ်လို့ ဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်မှ ရတဲ့အသံ မကြားရသေးပါဘူး။ ဆိပ်ကမ်းဆောက်လုပ်ဖို့က ဟိုးဘက်အော်ထိပ်ကနေ ဒီဘက်အော်ထိပ်အထိ ရှိတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ နောက်ဆိုရင် ဘာမှနေထိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိမယ် မထင်တော့ပါဘူး''။ ရွာက တံငါသည် အဘိုးအိုတစ်ဦးရဲ့ စကားသံ ဖြစ်သည်။
ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်မည့် ထိန်ကြီးရွာ ကမ်းခြေတွင် ဒေသခံ တံငါသည် မိသားစုများ၏ ယာယီတဲလေးတွေ နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ရှိပြီး ယင်းကမ်းခြေကို မှီပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြကြောင်း သိရသည်။''မောင်းမကန်ကနေ စက်ဘီးလေးတွေနှင့် ငါးလာဝယ်တဲ့ သူတွေကို အားကိုးရတယ်။ ငါးဝယ်တဲ့ စက်ဘီးသမားတွေကလည်း အမြဲတမ်း မလာနိုင်။ ဒီကနေ သွားရောင်းဖို့ ဆိုတာကလည်း ကုန်းလမ်းခရီးကဝေး၊ ရေလမ်းခရီးကလည်း တစ်နာရီခွဲကြာ ခုတ်မောင်းဖို့ ဒီဇယ်က သုံးဂါလန် လိုတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ငါးတွေက ပါကေးအဆင့်လောက်ပဲရှိတဲ့ ဈေးမကောင်းတဲ့ငါးတွေ၊ အခုလည်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကြောင့် သူတို့ နန်းတော်တွေလည်း ဘုံပျောက်ဖို့ နီးနေပြီ''ဟု ဒေသခံတစ်ဦးကဆိုသည်။ ရေနက်ဆိပ် ကမ်း တည်ဆောက်မည့် နေရာမှာ မောင်းမကန်နှင့် လွန်စွာ ဆင်တူပြီး လှပသည့် ကမ်းခြေတစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရသည်။ သံပိုက်လုံးတွေ သံရက်မကြီးတွေလောက်ပဲ တွေ့ရသေးပြီး စက်တွေကိုတော့ မတွေ့ရသေးပါ၊ ထိန်ကြီးကျေးရွာရေနက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် ထိန်ကြီးမှကလုံးထားရွာသို့ ဖောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ရေး-ထားဝယ် ကားလမ်းမကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားမည် ဖြစ်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိန် ကြီး-ကန်ချာနဘူရီ လမ်းမသစ်ကြီးကို ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အထိ တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ပြီးကြောင်း၊ ထိုနေရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ခရိုင်လေးခုခန့်က နီးကပ်စွာ ရှိနေပြီး ထို ခရိုင်လေးခုတွင် စက်မှုဇုန်ကြီးများ ရှိနေသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အနေဖြင့် တည်ဆောက်မည့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသည် ထိုင်းဘတ်ဘီလျံ ၁၀၀ ကုန်ကျခံကာ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားအတွက် များစွာအရေးပါမည့် စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ကာ အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ပါက ရေမိုင် ၁၂၅၀ ခန့်ကို လေးရက်ပိုသွားနေရသည့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ မာလက်ကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားစရာ မလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်လာကြတော့မည် ဖြစ်သည်။
တန်ချိန် ၅၀၀၀၀ ခန့်ရှိ သင်္ဘောကြီးများသည် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင် လာရောက် ဆိုက်ကပ်ပြီး ကုန်းလမ်းခရီးမှ ကုန်ပစ္စည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တင်ပို့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဟု ခေါ်နေကြသည့် ထိန်ကြီး ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှု အဓိက ဆိပ်ကမ်းအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဟု သိရသည်။ ထားဝယ်မြို့ရှိ အာဇာနည်လမ်းမကြီးမှ ဖြောင့်တန်းဖောက်လုပ်ထားသည့် မေတ္တာလမ်းကို အသုံးမပြုဘဲ ထားဝယ်မြို့မှ မိုင် ၂၀ ကျော်ဝေးသည့် ထိန်ကြီး-ကလုံးထား-ထိုင်းနိုင်ငံကို ကားလမ်းဖောက်မည် ဖြစ်သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထားဝယ်မြို့ကြီးကတော့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရုန်းကြွလာနေပြီ ဖြစ်သလို အနာဂတ် လူငယ်များအတွက်လည်း ၁၀ နှစ် စီမံကိန်းဖြင့် တည်ဆောက်မည့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကြီးမှာ အခွင့်လမ်းတွေ ရှိလာနိုင်တယ်၊ လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်း လုပ်ငန်းရှင်လေးတွေလည်း သူတို့နှင့် သင့်တော်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားနေသလို လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေလည်း နေရာစုံမှ ရောက်ရှိနေကာ ထားဝယ်မြို့ရဲ့ စီးပွားရေး အလားလာများကို အကဲခတ်နေကြပြီ။
မြန်မာဘုရင်က ဒုတိယမြောက်ဂျော့ဘုရင်ထံ ပေးခဲ့သည့်စာ နှစ် ၂၅၀ ကြာပြီးနောက် အဓိပ္ပာယ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့
အတွဲ ၂၆၊ အမှတ် ၅၀၂ (၂၁ - ၂၇၊ ၁၊ ၂၀၁၁)
မြန်မာဘုရင်တစ်ပါးက ၁၇၅၆ ခုနှစ် ဒုတိယမြောက်ဂျော့ဘုရင်သို့ ပေးပို့ခဲ့ သော ရွှေအစစ်ဖြင့် ခတ်ထားသည့် ရွှေပြားထက်တွင် ရေးထွင်းထားသော ယင်းပေးစာကို သုံးနှစ်တိုင်တိုင် သုတေသနပြုပြီးနောက်တွင် ကျွမ်းကျင်သူများက နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အဓိပ္ပာယ် ဖော်ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဟန်နိုဗာ စာကြည့်တိုက်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဂျော့ရုပဲလ်က ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
မြန်မာဘုရင် အလောင်းဘုရားက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် ဂျော့ဘုရင်သို့ ၁၇၅၆ ခုနှစ်တွင် ရေးသားပေးပို့ခဲ့သော အလျား ၅၅ စင်တီမီတာနှင့် အနံ ၁၂ စင်တီမီတာရှိသည့် ပတ္တမြား ၂၄ လုံး စီခြယ်ထားသော အဆိုပါ ရွှေ သ၀ဏ်လွှာသည် ဖတ်ရှုနိုင်စွမ်းသူမရှိ သောကြောင့် ဂျာမနီပြည် ဟန်နိုဗာမြို့ရှိ လိုက်ဘ်နစ္စအထိမ်းအမှတ် စာကြည့်တိုက်၏ လုံခြုံသော အမိုးခုံးတိုက်ခန်းကြီးတွင်း၌ လဲလျောင်းနေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ရှိပြီဖြစ်သည်။
အဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်သည့် ကျောက်မျက်များ စီခြယ်ထားသော ၎င်းသ၀ဏ်လွှာတွင် လှပခံ့ညားစွာ စီကုံးရေးသား မှုများဖြင့် တန်ဆာ ဆင်လျက် အလောင်းဘုရားဘုရင်မင်းမြတ်သည် ပုသိမ်မြို့ကြီးတွင် နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် ကုန်သွယ်မှု လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရေးကို အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အနေဖြင့် သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်အား အတည်ပြု ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာအက္ခရာများဖြင့် ရေးသားထားသော အဆိုပါပေးစာအား "ကြီးမြတ်သော စေတနာသဒ္ဓါ တရားရှိသော၊ ထီးဆောင်းမင်းတကာ တို့၏ မင်းဖြစ်သော၊ အဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်သည့် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံပတ္တမြား၊ ပယင်းတွင်းတို့၏ အရှင်သခင်၊ ဆင်ဖြူ ဆင်နီနှင့် ဆင် အမျိုးမျိုးတို့အရှင်" သို့ လိပ်စာမူထားပြီး နောက် ဆက်လက်၍ "အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ကြီးအား စိုးမိုးအုပ်ချုပ်သည့် အဆွေတော် ဘုရင်မင်းမြတ်အား မေတ္တာပို့သ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါကြောင်း" ၎င်းပေးစာတွင် ဖော်ကျူးခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆင်စွယ်ကြုတ်အတွင်း၌ ထည့်သွင်းထားသောပေးစာတွင် ဗြိတိသျှ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၌ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး ပုသိမ်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့် ဗြိတိသျှလူမျိုးတို့၏ အကြီးအကဲလည်းဖြစ်သူ မစ္စတာ ဟန်နရီဘရွတ်စ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေ မှုအကြောင်းကိုလည်း ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ပေးစာတွင် "အကြည်တော်မင်းမြတ်၏ သံတမန်တော် ဟန်နရီဘရွတ်စ်၏ ဦးနှိမ်လျှောက်ထားချက်အရ အကြည်တော်၏နိုင်ငံမှ သင်္ဘောများဆိုက်ကပ်ရန် ၎င်းညွှန်ပြသောအရပ်ဒေသတွင် ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသည်။
"ဘုရင့်တံဆိပ်တော် ခတ်နှိပ်ထားသော အမိန့်စာချွန်တော်ကို အင်္ဂလိပ် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ အရာရှိထံ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်၍ ပုသိမ်မြို့ဝန် အား အဆိုပါ (ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရန်) မြေကွက်ကို တိုင်းတာပြီး လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန်လည်း ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
"နိုင်ငံအချင်းချင်းတို့၏ ဘုရင်မင်းမြတ်များအကြား ရင်းနှီးသော မိတ်သင်္ဂဟဖြစ်လာသောအခါ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မင်းတစ်ပါး၏ အကူ အညီလိုမှုကို အခြားမင်းတစ်ပါးက ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ပြီး မိမိတို့ကလည်း ယင်းလိုအပ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်" ဟု ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရ သည်။
ဒေါက်တာယတ်ဂ်လေဒါကမူ အဆိုပါ ပေးစာအား မြန်မာဘုရင်၏ပိုင်နက်ကို နိုင်ငံခြားကျူးကျော်သူများက ခြိမ်းခြောက်မှုပြုသည့် ကာလတွင် ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
စစ်ပွဲအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်နေသော အချိန်ကာလတွင် အဆိုပါပေးစာ ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဒရတ်စ်မြို့သို့ ဆောင်ယူသွားပြီး ၎င်းမှ တစ်ဆင့် လန်ဒန်မြို့သို့ ဆက်လက်ပေးပို့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၀ီလျံပစ်က ဒုတိယမြောက် ဂျော့ဘုရင်လက်သို့ ဆက်သ လိုက်သည်။
တစ်ဖန် ဂျော့ဘုရင်က ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟန်နိုဗာရှိ တော်ဝင်စာကြည့်တိုက်သို့ မဆိုင်းမတွ ပို့ဆောင်လိုက်ပြန်ရာ ၁၇၅၈ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ယင်းပေးစာ အား အဆိုပါစာကြည့်တိုက်အတွင်း၌ ထားသိုလိုက်ပြီး တရားဝင် ပြန်ကြားစာ တစ်စောင်တလေမှ ပေးပို့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
၁၇၆၈ ခုနှစ်တွင် တော်ဝင်စာကြည့်တိုက်သို့ သတ္တမမြောက် ဒိန်းမတ်ဘုရင် ခရစ္စတီယန် ရောက်ရှိခဲ့စဉ်က အဆိုပါ ဆင်စွယ်ကြုတ် အတွင်း၌ ထည့်သွင်း ထားသည့် ရွှေသ၀ဏ်လွှာကို ပျက်စီးယိုယွင်းမှုအချို့ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ၎င်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထုတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲ စေခဲ့သည်။
A submission to the Human Rights Consultation with Foreign Affairs Canada – January 25, 2011 Ottawa
All three opposition parties, eighty-two individual MPs and Senators andanumber of Canadian civil society organizations including labour unions and Burmese dissident communities in Canada have all voiced their support for the Inquiry.
And the Government of Canada has already indicated support for such an inquiry:
“Canada supports both the UN Special Rapporteur’s work on human rights abuses in Burma, and the idea ofaUN Commission of Inquiry into human rights abuses by the Burmese regime,” said the Minister Lawrence Cannon inavideotaped message sent to CFOB on Sept. 3. “We will work with our allies in the international community to developacommon approach to support the recommendations that the Rapporteur will present to an upcoming session of the UN General Assembly,” he added.
Please seeavideo message of the Foreign Minister at http://www.youtube.com/watch?v=8wQeCdf0LM0
Canadians are not alone, thirteen other countries have also madeapublic commitment to the call: Australia, UK, Czech Republic, Slovakia, US, Hungary, New Zealand, Netherlands, French, Ireland, Lithuania, Estonia and Argentina.
Please see news articles and statements below:
· 82 Canadian Parliamentarians supporting foraUN Commission of Inquiry on Burma
· Liberals call on the government to supportaUN Commission of Inquiry in Burma
· New Democrats call for UN commission of inquiry on Burma
· BQ Presses Harper to Get Involved in Ending the Crimes Against the Burmese People
· Canada throws support behind Burma inquiry
· Canada backs UN inquiry into crimes in Burma
Message of Support foraCommission of Inquiry from Canadian Foreign Minister
၂၆ရက်ဒီနေ့မနက်၉နာရီမှာABSDFရဲဘော်ဟောင်းကိုဝင်းဗိုလ်သည်ကင်ဆာရောဂါဖြင့်ကနေဒါနိုင်ငံတိုရန်တိုမြို့တွင်ကွယ်လွန်သွား ပါသည်။ဇနီးသည်နှင့်အတူသမီးငယ်၃ဦးကျန် ရစ်ပါသည်။စနေနေ့တွင်သဂြိုင်္လ်မည်ဟုသိရပါသည်။အသေးစိတ်ကိုထပ်မံဖေါ်ပြပါမည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/26/2011 1 အကြံပြုခြင်း
မင်းတြားကြီး သန်းရွှေနဲ့ နေပြည်တော် ခိုးသားများ အပု...
NLD ကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရန် အမေရိကန် အဆင့်မြင့်...
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးသည် မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူသုံးစွဲမ...
စောင့်မျှော်နေတဲ့ ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း (DAWEI DEEP...
မြန်မာဘုရင်က ဒုတိယမြောက်ဂျော့ဘုရင်ထံ ပေးခဲ့သည့်စာ ...
LeadingaCommon Approach to the Commission of Inq...